Izindaba zika May. Ukukhethwa kwamanoveli obugebengu, ezokuhamba namahlaya Izincwadi Zamanje
Izindaba zika May. Ukukhethwa kwenoveli emnyama, ukuhamba kanye nokuhlekisa
UMariola Diaz-Cano Arevalo | 01/05/2021 12:00 | Kubuyekezwe ku- 01/05/2021 12:15 | Amahlaya, Amabhuku, I-Novela, Inoveli emnyama
Inyanga entsha ye Swimsuit y izindaba ngomumo. Lokhu kungenye ukukhethwa kwezihloko eziyi-5 lapho kukhona khona ukuhamba ngokudlula USSR nasezitimeleni ze amahlaya, emnyama kakhulu ibalekela ku Galicia kakade EFrance, edolobheni laseMonet, futhi ukuhlangana kobuzalwane okuthakazelisa kakhulu kuma-moor aseNorway. Asibone.
1 Iminduze yamanzi amnyama - uMichel Bussi
2 Impilo Eyimfihlo yase-ularsula Bas - i-Arantxa Portabales
3 Umbuso - Jo Nesbø
4 I-Snowbreaker - Ithemu -Jean Marc Rochette noBenjamin Legrand
5 Ihlobo lokugcina le-USSR - uSara Gutiérrez (ngemifanekiso kaPedro Arjona)
Iminduze yamanzi amnyama - UMichel Bussi
Kakade ezitolo zezincwadi
UMichel Bussi unguprofesa e-University of Rouen kanti lokhu bekungokwakhe inoveli yesibili, okuyi-classic yanamuhla ezweni laseGallic, eyayiyisicoco esimnyama esathengiswa kakhulu ngo-2011 futhi yawina izindondo eziningi. Impumelelo yayo isivele isabalalele emazweni angaphezu kwama-30.
Ihlelwe ngaphakathi IGiverny, idolobha laseMonet, futhi izakhamuzi zakhona zinokuningi okufanele zikufihle. Kwenzeka ezinsukwini eziyishumi nantathu, kuqala ngokubulala bese kugcina ngokunye. Isidumbu sikaJérôme Morval, indoda ethanda ubuciko njengabantu besifazane, ivela emfudlaneni futhi ephaketheni lakhe bathola ikhadi leposi le-Monet's Water Lilies elinamagama athi: "Iminyaka eyishumi nanye, siyakubongela!" Futhi ukusuka lapho imidlalo izonqamula.
Impilo Eyimfihlo yase-ularsula Bas - I-Arantxa Portabales
U-Arantza Portabales uthathwe njengendlovukazi entsha yenoveli yobugebengu kuzwelonke, yize ecabanga ukuthi kuyihaba. Kepha iphuzu ukuthi Ubuhle obomvu, inoveli yakhe yangaphambilini, kwaba yimpumelelo futhi iyaqhubeka. Kuyo wasethula emaphoyiseni USantiago Abad no-Ana Barroso, izithandani ezinesisa ezaziphethe icala lika-Agatha Christie futhi ezinemvelaphi enhle yabalingiswa. Manje ubuya nalesi sihloko sesibili nabaphikisi abafanayo.
Kulokhu kuzofanele baphenye ukunyamalala kuka-Úrsula Bas, umbhali ophumelelayo, ophila impilo ebonakalayo ejwayelekile eSantiago de Compostela. Umyeni wakhe, uLois Castro, uzoya kobikela amaphoyisa. U-ularsula uthunjiwe futhi uyazi ukuthi kungekudala bazombulala.
Umbuso - UJo Nesbø
Awukho unyaka ngaphandle kwenoveli ngu Jo Nesbø (futhi angalahlekile). Okwedlule bekuyizimbili: Igazi eqhweni y Ilanga legazi, bafushane futhi babhabhadiswa njengendaba yababulali base-Oslo. Futhi manje kuza lesi sihloko esisha lapho sithola khona i- Indaba yakudala yokuhlangana kwabazalwane. Kubhalwe kumuntu wokuqala futhi ngamakhasi angama-50 afundwa futhi azi indwangu yeNesbø, isivele isusile amathumbu ami futhi yafaka izimpukane eziningana ngemuva kwendlebe yami.
Abalingiswa abaphambili yibo Roy, indoda enesizungu ohlala esithabathabeni somuzi omdala ezintabeni, kude nawo wonke umuntu. Unguchwepheshe wezinyoni futhi uphethe igalaji lasedolobheni futhi wonke umuntu uhleba ngaye. Bese ubuya Carl, umfowabo omncane, angakaze ambone selokhu ayofunda e-United States eminyakeni eyishumi nanhlanu eyedlule, ngemuva kokushona kabuhlungu kwabazali bakhe engozini yemoto. Uhamba neyakhe unkosikazi omusha sha, uShannon, umklami oyindida. Bobabili bahlose ukwenza ukwakha ihhotela elikhulu emazweni omndeni wakudala, okwengeza ukuthi abacebile nawo azoletha ukuchuma endaweni.
Kepha emadolobheni amancane wonke umuntu uyazana futhi uyazi iziqephu ezithile zesikhathi esedlule abakakhohlwa.
I-Snowbreaker - Ithemu -UJean Marc Rochette noBenjamin Legrand
Ingxenye yesibili nesiphetho salokhu incwadi yamahlaya ehlelo okwenziwa ifilimu ngo-2013 ngumqondisi we Izimuncagazi futhi lokho kusanda kushintshelwa ochungechungeni lwethelevishini yiNetflix. Imayelana nokuhunyushwa kwencwadi Le Transperceneige 4. Itheminali, eyanyatheliswa ngo-2015, okungeyochungechunge Ukuqhekeka kweqhwa.
ISnowbreaker, ngemuva kwamashumi eminyaka wokuhamba okungenanjongo inqamula iplanethi efriziwe, isivele ayikho esimweni sokuqhubeka nokuhamba. Abagibeli bayo - isintu esisindile - kufanele basishiye isitimela beyofuna isiphephelo esisha. Kukhona ubungozi, kepha bacabanga ukuthi bazokwenza kangcono. Noma cha…
Ihlobo lokugcina le-USSR - USara Gutiérrez (ngemifanekiso kaPedro Arjona)
USara gutierrez Ungudokotela, umhumushi waseRussia, umbhali nentatheli.
Kulesi 2021 ngoDisemba zizogcwaliseka Eminyakeni engama-30 ngemuva kokusayinwa kokuphela kwe-Union of Soviet Socialist Republics aphoqwa ngabongameli bamaningi alawo ma-republic futhi eholwa nguMikhail Gorbachev. Kwakusehlobo lika 1991 lapho umbhali, okwakungeyona neze into ehlukile kuleli qiniso, uthathe uhambo olwamthatha eKharkov (E-Ukraine), lapho ngangifunda khona i-ophthalmology, ukuwela izwe, kusukela oLwandle iBaltic kuya oLwandle Olumnyama. Kwenzeka kuye ukuthi atshele ngakho kule ncwadi lapho abamba khona hhayi nje amazwibela empilo yansuku zonke yeminyaka emibili edlule ye-USSR, kodwa nangeminyaka emihlanu yokuqala yempilo ezimele yama-republic, nawo wachitha lapho.
Unikeza izinhlamvu imifanekiso UPedro Arjona, umklami wezithombe, umdwebi wezithombe nomdwebi. Kwaziwa njenge umculi wamahlaya ne-El Cubri ehlangene, okwathi phakathi neminyaka engamashumi ayisikhombisa namashumi ayisishiyagalombili yavuselela ikhomikhi ngomsebenzi owaziwa ngokugqamile kwayo.
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Izinhlobo » Inoveli emnyama » Izindaba zika May. Ukukhethwa kwenoveli emnyama, ukuhamba kanye nokuhlekisa
UJuan Gelman. Isikhumbuzo sokuzalwa kwakhe. Ezinye izinkondlo